इन्फो प्लस Archives - Page3of 15 - Living with ICT
Home / इन्फो प्लस (page 3)
नेपाल टेलिकमले ल्यायाे ‘शुभ रात्री’ प्याकेज, ८५ रुपैयाँमा १२ सय एमबी डेटा
काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले प्रिपेड ग्राहकका लागि रात्रीकालिन ‘शुभ रात्री’ प्याकेज ल्याएको छ। तीजलाई लक्षित गरी कम्पनीले अफर ल्याएको हो। टेलिकमले भदौ १८ गतेदेशखि असोज १ गतेसम्मका लागि यो अफर ल्याएको जनाएको छ। यो अफर राती ११ बजेदेखि विहान ५ वजेसम्ममात्र प्रयोग गर्न मिल्छ। प्रिपेड ग्राहकले ४० रुपैयाँमा ५०० एमवी र ८५ रुपैयाँमा १२ सय एमबी डेटा पाउँछन्। पाँचसय एमबी डेटा …
वेबसर्फरको नयाँ सेवा : एउटै केबलबाट इन्टरनेट र टिभी, जडान र राउटर नि:शुल्क
इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेशन प्रालिले नयाँ सेवा आरम्भ गरेकाे छ । भदौ २३ देखि राजधानीमा सुरू भएकाे क्यान कमटेक मेलाको अवसर पारी वेबसर्फरले विभिन्न केबल टिभीहरुसँग सहकार्य गरेर सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा ल्याएकाे घाेषणा गरेकाे हाे । यसका लागि वेबसर्फरले इन्टरनेटको सुविधा दिइरहेको उपत्यका र उपत्यका नजिकका शहरहरुमा स्काइ केबल टिभी, मेघा केबल, नागार्जुन …
के तपाइलाई आफ्नो मोबइल फोनको आइएमइआइ नम्बर थहा छ ?
मोबाइल चलाउँदै हुनुहुन्छ, तर के तपाइलाई आफ्नो मोबाइल फोनको आइएमइआइ नम्बर थहा छ ? थाहा छैन भने आजै थहा पाउनुहोस । यस नम्बर तपाइको मोबाइल हराएको खण्डमा पत्ता लगाउन सहयोगी साबित हुन सक्छ । हरेक मोबाइललाई एउटा विशेष नम्बर प्रदान गरिएको हुन्छ । यसलाइ आइएमइआइ ( इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टीटी ) नम्बर भनिन्छ । कसरी थहा पाउने त आइएमइआइ नम्बर …
क्यामेरा किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
अहिले बजारमा धेरै ब्राण्डका डिजिटल क्यामेराहरु उपलब्ध छन् भने धेरै विकल्पहरुमा उपलब्ध छन् । केही हजार रुपैयाँदेखि लाखौं रुपैयाँसम्म पर्ने क्यामेराहरु अहिले नेपाली बजारमा उपलब्ध छन् । एउटा डिजिटल क्यामेरा खरिद गर्नुअघि तपाई बेसिक या एड्भान्स्ड स्तरको क्यामेरा खरिद गर्न चाहनु हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्नुहोस् । यदि तपाई सामान्यतया झट्ट क्यामेरा निकालेर फोटो खिच्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले पोइन्ट एन्ड …
ट्विटरले ‘क्वालिटी फिल्टर’ फिचर थप्यो, यसरी सूचारू गर्नुहाेस्
अनावश्यक नोटिफिकेशनले हैरान भएका प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गर्दै ट्विटरले एउटा विशेष फिचर ल्याएको छ । कम्पनीका अनुसार ‘क्वालिटी फिल्टर’ नाम गरेको यस फिचर आफ्नो ट्विटर एकाउन्टमा सुचारू गरेपछि यसले प्रयोगकर्तालाई अनावश्यक र अश्लील नोटिफिकेशनबाट मुक्त गर्ने छ । अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमहरूका अनुसार उक्त फिचर सेटिङ्गमा गएर सुचारू गरेपछि त्यसले स्वतः अनावश्यक र अश्लील सामाग्री नोटिफिकेशनलाई हटाउनेछ । यसका साथसाथै प्रयोगकर्ताले यो …
नेपालको एजुकेशन सर्च पोर्टल : एजुकेशन हब नेपाल डटकम
हिजोेआज शैक्षिक क्षेत्र व्यापक हुँदै गईरहेको छ । विद्यार्थीहरु कुन कलेज उपयुक्त हो र कुन स्कीम आफ्नो लागि सहि हुन सक्छ, उक्त पाठ्यक्रममा के-कस्ता विषयवस्तु छन् र त्यसका लागि कसलाई बुझ्ने भन्ने प्रश्नले पिराेलिएका छन् । त्यो सब प्रश्नको उत्तरका लागि एउटा सर्च पोर्टल छ EducationHubNepal.com । यो पोर्टल नेपालमा उच्च शिक्षाका लागि सम्भाव्य संस्थान र विषयहरु विद्यार्थी तथा अविभावकहरुलाई …
६० सेकेण्डमा के के हुन्छ इन्टरनेटमा ?
इन्टरनेटमा जम्मा ६० सेकेण्डमा के के होला त ? के तपाइ अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ, १ सेकेण्डमै हजारौ कामहरु भइरहेका हुन्छन इन्टरनेटमा । इन्टरनेटले संसार यति साघुरो र प्रतिस्प्रधी पनि बनाइरहेको छ । केहि तथ्यांक हेरौ न त, जम्मा ६० सेकेण्डमा के के हुनेरैछ । १. एक मिनट अर्थात ६० सेकेण्डमा १ करोड बढि नया पेजहरु साइबरस्पेसमा थपिइरहेका हुन्छन । २. …
नेपालमा औलामै गन्न सक्ने उत्कृस्ट सेलिब्रेटीमा पर्दछिन नायिका श्वेता खड्का । उनलाइ नायिकाको मात्र परिचय दिनु अन्याय झै हुन्छ । उनि सफल महिला उद्यमी पनि हुन, जसले आधा दर्जन कम्पनी तथा सस्था सम्हालेर अघि बढिरहेकी छिन् । भनिरहनु पर्दैन्, केहि समयअघि कलाकार श्रीकृष्णको दुखद निधन पश्चात उनि छट्पटिन, तड्पिन र पिडामा दिनरात गुजारिन् । त्यो पिडा र दुखद घटनाको रिकभरी …